Article submitted by: minkyaw thuyein on 14-Oct-2012
သဟဇါတ မှသည် ပဋိပက ချုပ်ငြိမ်းရေးဆီ သို. ၊
ဖြစ်နိုင်တာ မဖြစ်နိုင်တာပြောရရင် မဖြစ်နိုင်တာမှရှိဘူး ၊မဖြစ်သေးတာ
သာဘဲ ရှိတယ်ဆိုတဲ့ လူကြီတွေရဲ.စကားကိုဘဲ ညွှန်းရလိမ့်မယ် ၊
ပဋိပက္ခဆိုတာဘာလဲ ၊ ရန်ဖြစ်ကြတာပေါ့ ၊ ပေါ့ဆိုလို.ပေါ့တယ်မထင်နဲ.နော် နိုင်ငံရေးစကားနဲ.အကြမ်းအားဖြင့်ပြောရရင် ပဋိပက္ခဆိုတာ လူမျိုးစွဲ ဘာသာစွဲ ၀ါဒစွဲ ပုဂိုလ်စွဲတွေကြောင့် ၊ အကြောင်း အမျိူးမျိူးနဲ. အကြောင်းမရှိအကြောင်းရှာပြီး မသင့်မတင့် ရန်ဖြစ်ကြတာ သတ်ပွဲကြီး
တွေအထိ ဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာကို လူ.သမိုင်းက အထင်အရှား ပြတယ် ၊ ပဋိပက္ခကို လုံးဝချုပ်ငြိမ်းအောင် ဘယ်သူမှမလုပ်နှိုင်ဘူးဆိုတဲ့ သာဒကတွေလဲရှိတယ် ၊ ပဋိပက္ခမှူကို ကြီးထွားအောင် မဖြစ်ဖြစ်အောင် လုပ်နိုင်ကြတာဘဲ ရှိတယ် ၊ ၀မ်းသာစရာတခုကတော့ ချုပ်ငြိမ်းအောင်
မလုပ်နိုင်သည့်တိုင် တဦးနဲ.တဦး သဟဇါတဖြစ် အောင်ဘဲ လုပ်နိုင်
လိမ့်မယ်၊ ရိုးရိုးစကားနဲ.ပြောရရင် မိတ်ဆွေ မဟုတ်တောင် ရန်သူမဖြစ်
စေနဲ.ဆိုတဲ့ စကားရှိထားတယ် ၊ စိတ်ချ ရတာ မချရတာက တပိုင်းဘဲ ၊ လိုသလိုသာ ယူပေတော့ ၊ ဒို.နိင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့ ပဋိပက္ခဟာ တမင်မွေး
ထားကြတဲ့ ပြသနာတခုလို.တောင်ပြောရင် ရလိမ့်မယ် ၊ တိုတိုပြောရရင် ကိုယ့်နယ်မှာကိုယ် ဘုရင် တပါးစီ အဖြစ် မင်းမူခြင်နေကြလို.ဘဲ ဖြစ်တယ် ၊
ပဋိပက္ခ ချူပ်ငြိမ်းဘို.ဆိုတာ တဖက်ဖက် လုံးဝပျက်ဆီးရင်ဖြစ်စေ ၂ ဖက်စလုံးပျက်ဆီးရင်ဖြစ်စေ ၂ ဖက်ပေါင်းဖက်သွားကြရင် ဖြစ်စေ သဟဇါတအဖြစ် ရတတ်တာမျိုးဘဲ ၊ ဒို.နိင်ငံမှာ ၂ ဖက် ပေါင်းဖက်
သွားရင် အတိုင်းထက်အလွန်ဘဲ လို.ဆိုရလိမ်.မယ် ၀မ်းသာကြရဘို.ဘဲ ၊ ဒါပေမဲ့ ခက်နေတာက ဒို.နိုင်ငံမှာရှိနေတာက ၂ ဖက်လဲမက ၃ ဖက်လဲမက ဘယ်နှဖက်လဲလို.တိတိ ကျကျ ပြောရမှာတောင် ခက်နေ
လေရဲ.၊ စိတ်တူ သဘောတူ အတူမပေါင်းဖက်သမျှ ဘယ်သူမှ စိတ်မချ
ရဘူး ပျော်အောင်အိပ ရ ၀အောင်စားရလိမ့်မယ်လဲမဟုတ်ဘူး၊ နှစ်ပေါင်းများစွာ ပဋိပက္ခဖြစ်နေခဲ.ကြတဲ့ ဒို.တတွေဟာ ချက်ချင်း တယောင်အပေါ် တယောက် လုံးဝ ယုံကြည်စိတ်ချဘို.ဆိုတာ အချိန်
ဒို.နိူင်ငံမှာ ဒို.အချင်းချင်း ပဋိပက္ခဖြစ်နေကြတာ ဒို.သမိုင်းတလျှောက်
လုံးဆိုရင်မှားမလား၊ ဟိုခေတ် ဟိုအခါ ထားလိုက်ပါအုံး ၁၉၄၈ ခုက စခဲ့တဲ့ဒို.ခေတ်မှာ ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာ မတွေ.ခဲ့ရဘူးပါဘူး ၊ မှန်ခြင်လဲမှန်မယ် မှားခြင်လဲမှားမယ် ဒို.နိူင်ငံမှာ လိုအပ်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေး မရှိရတာဟာ တကိုယ်ကောင်းသမားတွေ အစွဲအလန်းကြီးတဲ့ အစွန်း
ရောက်သမားတွေကြောင့် နဲ. အထက်ကပြောခဲ့တဲ့ တမင်းမူ ၀ါဒစွဲတွေ
ကြောင့်ဘဲ ၊ အကြောင်းအကျိုးနဲ.အကျိူးဆက်တွေကို ခေါင်းအေးအေးနဲ.မစဉ်းစားဘဲ ၊ ဂမူးရှူးဒိုး တနပ်စားလုပ်ခဲ့ကြသူတွေကြောင့်ဘဲ ၊ ၆၄ နှစ်ဆိုတဲ့ အချိန်တွေကို အကျိုးမဲ့ အလဟသတ်ဖြုံးပစ်ကြတယ် ၊ သေလိုက်တဲ့လူတွေ ကုန်လိုက်တဲ့ငွေတွေ မနဲပါဘူး ၊ နောက် တနိုင်ငံ
တောင် ၀ယ်လို.ရနိုင်တယ် ၊ သေသူတွေကတော့ သေကုန်ပါပြီ သင်္ဂျိုင်း တနေရာတောင် မရှိကြဘူး ၊ တကယ်တော့ သူတို.အတွက်ပူစရာမလို
ဘူး ခရစ်တော်ထံမှာဘဲ အိပ်ပျော်ကြမယ် ၊ တခြားသူတွေကလဲ တာဝတိန်သာဘုံတဆင့်ဆင့် မှာ နေရာရကြမှာဘဲ ၊
ခေါင်းဆောင် ရွေးကြရာမှာလဲ ပဋိပက္ခ မပါရင်းမပြီး ပြန်ဘူး ၊ သူ.အကြိုက် ကိုယ့်အကြိုက်ဆိုတာရှိကြစမြဲ မဟုတ်လား ၊ အနဲအကျဉ်း ဆိုတာတောင် ဒို.လိုနိုင်ငံမျိုးမှာ အိုးနဲ.ဆန် မတန်အောင် ဖြစ်တတ်တာ ဒို.မျက်မြင် လက်တွေ.ဘဲ ၊ ဒါနဲ.တောင် ဒို.တတွေ ဘာ့ကြောင့် ဆင်ခြင်မှူ ကင်းနေကြသေးသလဲ ဆိုတာ ကတော့ ပယောဂ အပမှီနေလို.ဆိုတာ ဖြစ်နှိုင်တယ် ၊ အမှန်ကို ၀န်ခံရရင် မြန်မာတွေအချင်းချင်း တိုက်ခိုက်
သတ်ဖြတ်နေကြတာနှစ်ပေါင်း ထောင်နဲ. ရာနဲ ရှိနေခဲ့တာဘဲ ဖြစ်တယ် ၊ ပယောဂ ၀င်တယ်ဆိုတာ စဉ်းစားစရာဘဲ ၊ ဒို.ကိုယ်တိုင်က အသိတရား ဆင်ခြင်တုန်တရား ခေါင်းပါးလောက်အောင် မွှန်နေ ကြတာလဲဖြစ်
နိုင်တယ် ၊ သက်ဆိုင်ရာ မိဘလူကြီးတွေ ဆရာဆရာမတွေရဲ.တာဝန်လို.ပြောရမလား ၊ လူငယ်တွေကိုကလဲ တာဝန်သိစိတ်မရှိ ဦးနှောက် မခိုင်လို.ဘဲလား ၊
နာနာဘာဝ ၀ိနာဘာဝ ဆိုတာကိူယုံကြည်ရင် ပယောဂတို. အပမီတယ်
တို.ဆိုတာတွေကိုယုံရမယ် ၊ ပယောရ မကပ် အပမမီ ရအောင် လူကြီး
တွေက လက်နဲ.ရေးတာကို ခြေနဲ.ဖျက်နေကြသူတွေကလဲ ဖျက်နေလေ
ရဲ. ၊ ဘက်မလိုက်ကြားနေ၀ါဒ ဆိုတာ စစ်အေးကါလအပြီး မရှိတော့
ဘူးလို. လိုရာစွဲပြောသူတွေက ပြောကြတယ်၊ တိုတိုပြောရရင် ဘက်လိုက်
ရင် စစ်တလင်း ဖြစ်မှာ သေချာတာပေါ့ ၊ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်အတွင်းက ကိုယ်တွေ.ကြုံခဲ့ဘူးတယ် မဟုတ်လား ၊ အိမ်နီးချင်း အိန္ဒြိယနိုင်ငံက ချန်ဒရာဘို(ရှ) လဲ ဂျပန်အကူအညီ တောင်းပြီး စစ်တပ်ဖွဲ.ဘို.လုပ်ဘူး
ဒို.မြန်မာနိုင်ငံရဲ.ရှိခဲ.တဲ့ ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ ဘက်မလိုက်ကြားနေ၀ါဒ ဘာဖြစ်
နေသလဲ ၊ ယိုယွင်းနေပြီလား မတတ်သာလို.မန်လျှော့ ရပြီလား ၊ ဒီပုတ်ထဲက ဒီပဲဖြစ်ရပြီလား ၊ အကြောင်းနဲ.အကျိုးဟာ ဒွန်.တွဲ နေတာဖြစ်တယ် ၊ ပွင့်လင်းဝါဒ ကါလမှာ ဒို.တတွေ ဘယ်လေါက်ထိ ပွင့်လင်းကြမလဲ တကယ်ပြောတာလား ၊ အာစီယံမှာရော ဘက်မလိုက်
ကြားနေအဖွဲ.မှာပါ ပါဝင်သူအဖွဲ.၀င် ဘယ်သူက ဘက်မလိုက်ကြားနေသူ
ဆိုတာ အရူပ်ဆွဲပြရလိမ့်မယ် ၊ ပြောသာနေတာ နိုင်ငံရေးအပါအ၀င် ဘယ်ဟာမှာမှ ဘယ် သူမှ ထင်သလိုမပွင့်လင်းကြပါဘူး ၊ သက်ဆိုင်သူ
တွေက ဒို.ကိုအသိမပေးတာတွေ အမှန်အတိုင်း မပြောတာတွေ တပုံကြီး
ဘဲ ၊ အရာရာ ပွင့်လင်းရမယ်ဆိုရင်ခက် ကုန်ရောပေါ့ စဉ်းစားကြည့်ကြ
စစ်အေးကါလဆိုတာ သိခြင်လိုက်တာ ၊ ပြီးခဲ့တဲ့ ရာစုအတွင်းရော အခုရာစု အစမှာပါ စစ်အေးကါလဆိုတာ ဘယ်ကါလကို ပြောတာလဲလို.မေးခြင်တယ် ၊ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ပဋိပက္ခမှူဆိုတာတွေရှိနေသမျှ စစ်ဆိုတာ
လဲ ရှိနေမယ် ဖြစ်နေမယ်ဆို တာကို လက်တွေ.မို. အကြွင်းမရှိ ယုံကြည်
ကြဘို.ဘဲ ၊ ကမ္ဘာ့သမိုင်းတလျှောက် လေ့လာရင် စစ်မရှိ တဲ့ ကါလဆိုတာ ဘယ်တုံးကမှ မရှိခဲ့ဘူး ဘူးဆိုတာတွေ.ကြရမယ် ၊
စစ်အပါအ၀င် ပဋိပက္ခတွေဟာ တိုးတက်ဘို.လား ဆုတ်ယုတ်ဘို.လား ဆိုတာ အတိအကျ ဖြေနှုိုင်ဘို.ခက်တယ် ၊ ဘာပစ္စည်း မဆို လူ.တန်ဘိုး
ထက်ပိုဒါ မရှိဘူး အစားထိုးလို.ရတယ် လူသာအဓိက အစားထိုးလို.မရ
ဘူး ဆိုပြီး ကိုယ်.အဓိပ္ပါယ်နဲ.ကိုယ် အမျိုးမျိုး ပြောနေကြတယ်၊
သဟဇါတ ဆိုတာ ဖြစ်ကေါင်း ရှိကေါင်းတယ် ၊ အယောင်ဆောင်မှူတွေ လုံးဝကင်းကြဘို.လိုတယ်၊ ယုံကြည် စိတ်ချမှူတွေအပြည့်ဝရှိဘို. လိုတယ် လို.ဘဲပြောခြင်တယ် ၊
သိသလေါက်ကတော့ နိုင်ငံရေးသမားတွေဟာ ပြည်သူလူထု အထင်ကြီးအောင် လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြီးပြောခြင်တာ ပြောနေ ကြတာဘဲ ၊ သူတို.ကိုအထင်မကြီး သင့်ဘူး ၊ နိုင်ငံရေး ၅ နှစ် သက်တန်းကါလဆိုတာ ဖင်လှဲ.ခေါင်းလှဲ.နဲ.ပြီးသွားတာ ၊ တကယ် နစ်နာဆုံးရှုံးရသူတွေက ပြည်သူလူထု ၊ တယောက်ပြီး တယောက် အလှည့်ကျ လုပ်ခြင်တိုင်းလုပ်ခဲ့ကြတာကို ဒို.အနေနဲ. ၂ တုံးစား ၃ တုံးစား
လို.မှဘာမှန်းမသိ ဆက်စားနေရင် ဒို.ကြိုက်လို. ဒို.စားတာ ဘဲပေါ့ ၊ သူများနဲ.ဘာဆိုင်သလဲ သူတို.ကို စွဲမထည့် နဲ.လေ ဒို.အပစ်ဘဲ ၊ နိုင်ငံတခုတည်ထောင်တာ နှစ်ပေါင်း ထောင်ချီနေစေ မပြီးဘူး ဆိုတာ တသွေမတိမ်း မှတ်ထား ကြစမ်းပါ ၊
ခက်တာက ဘယ်သူကမှ ဘယ်သူနဲ.မကင်းနိုင်ကြဘူး ၊ ဒါကြောင့် တရား
မျှတ လွတ်လပ်ခြင်း လို. ဆိုထားတယ် မဟုတ်လား ၊ အဓိပ္ပါယ်က ရှင်းနေ
တာဘဲ ၊ ဒါပေမဲ့ တချို.လူတွေဟာ သူတို.ဟာသူတို. ရာဇဖွား အဓိပတိ
ဖွားဆိုတဲ့ ဗေဒင်ကိန်း နဲ.သူများ မျက်ခုံးပေါ် စင်္ကြံန်လျှောက်ကြတယ် လျှောက်ခြင်နေကြတယ် ၊ တချို.ဟာဆိုရင် သူတို.မှမင်းမျိုး သူတို.မှ
မင်းသွေးဆိုပြီး အများ အထင်ကြီးအောင် ဟိန်းဟောက်နေကြတယ် နောက်လိုက်တပ်သားမရှိဘဲ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဗိုလ်ဆွဲခန်. ၊ အချင်းချင်း
တယောက်ကိုတယောက် ဆွဲခန်. ထောက်ခံနေကြတဲ့ ပေါ်ပင် ဗိုလ်ကြီး
တွေဘဲ လို.ဆိုရင်မှားမလား ၊
မြန်မာ့သမိုင်းမှာ မြင်းချေးကြုံး က ဘုရင်ထဖြစ်တာပါဆိုရင် မှန်တာကို
ပြောတာမို.မနာကြနဲ.နော် ၊ ဘယ်ကမင်းမျိုးမင်းသွေး တွေလဲ ၊ မင်းမှူ
ထမ်းဆိုတာဘဲ လွန်လှပြီ ၊ နိုင်ငံတော်နဲ.နိုင်ငံသားတို.အတွက်ဆိုတဲ့ ပေါ်ပင် တိုင်းချစ် ပြည်ချစ် မျိုးချစ်တွေ အခုမှ ဘယ်နေရာကဘယ်လို ပေါ်လာကြတယ်တော့ မသိဘူး ၊ တောင်ပုံယာပုံဘဲ ၊ အရင်က ဘယ်သူ
တွေကို ဘယ်မှာသွားပြီး ဘယ်သု.ကို ချစ်နေကြသလဲဆိုတာလဲ မသိရ
သလောက်ဘဲ ၊ တသက်လုံး ဒီလိုနဲ.အရပ်ရပ် လှဲ.ပါတ်စားလာတာ အီနေပြီ ၊ ဒါနဲ.တောင် မ၀ကြသေးဘူး ၊ အလှဲ.အပါတ် သိပ်မလုပ်ကြပါနဲ. ခေတ်ပြောင်းနေပါပြီ ။ လည်လွန်းတဲ့ ဘီး ချေးနင်းမိတတ်တယ် တဲ့ ၊
်သိက္ခာကိုပါ အရှက်မရှိရောင်းစားတဲ့အပြင် သူတို.ကိုယ် သူတို.လဲ သူများ
နိုင်ငံမှာ ပြည်တန်ဆာတပိုင်း ဖြစ်နေကြ သူတွေကို ပြန်လာကြပါ သူကောင်းပြုမယ်ဆိုတာကတော့ ဒီလိုဆို လွန်တာပေါ့လို.ဘဲပြောတော
့မယ် ၊ ဒါဟာ ယခင်အစိုးရပိုင်းအတွက် ကိုယ်အပစ်ကိုယ် ၀န်ခံတာ ဖြောင့်ချက်ပေးပြီး အသနား ခံတာ တမျိုးဘဲလို.ဆိုခြင်တယ် ၊ဘယ်လိုဘဲ
ဖြစ်ဖြစ် ခွေးမြီးကောက်ကို ကျည်တောက်စွပ်ရင် ခဏဘဲရမယ်တဲ့ ၊ ကျီးကန်းဟာ ဥဒေါင်း မဖြစ်နိုင်ဘူးလို.ဆိုတယ် ၊ လိုအပ်သူကို ပြန်လည်ထူထောင် ပေးတာကတော့ ကောင်းတဲ့ အလုပ်ပါ ။ ဒါပေမဲ့ စီစီ စစ်စစ် တော့ လုပ်သင့်တယ်လို.ပြောပါရစေ ၊
သူတို.တတွေရဲ. သင့်တင့်လျှောက်ပါတ်စွာနေတတ် စားတတ်မှူတွေ အတွက် သူတို.ကို ချီးကျူးရမယ် ၊ ဂုဏ်ယူရမလားဆိုတာ ကိုတော့ စဉ်းစားရလိမ့် အုံးမယ် ၊ သက်တော်ရှည် အမတ်ကြီး ဦးပေါ်ဦး သွေး ပါကြတယ် ထင်ပါရဲ. ၊ အခုချိန်ကါလ မြန်မာ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ ဆွေတော်
မျိူးတော် မဟာမျိူးမဟာနွယ် ဆိုတာ ကိုယ့်ဟာကိုပယ် ဖန်တည်း ပြီး မေ့ပျောက်နေတဲ့ လူအလွှာတမျိုး ၊ သူတို.ကစပြီး မျိူးဖျက် ခဲ့ကြတာဆိုရင်
မလိုလို.ပြောနေတာ မဟုတ်ဘူး နော် ၊ အားမဏာတမ်းပြောရရင် သူတို.တွေဟာ မောင်နှမချင်း တောင် ကမြင်းကြတဲ့ ခွေးမျိူးတွေ ၊ ဒါနဲ.တောင်
အားရ ကျေနပ်ခြင်း မရှိ နိုင်ငံခြားသားကိုမှ လင်လုပ် မယားလုပ်ပြီး မျိူးမ
စစ်လူမျိူး သားဖေါက်လုပ်ငန်းနဲ.ဟိုလဲ မရောက် ဒီလဲမပေါက်ကြတဲ့ သူတို.ကိုယ်သူတို.တောင် ဘာကောင်မှန်း မသိကြတော့တဲ့ တခါရိုး တခါရယ် အောက်တန်းစားတွေလို.သာဘဲ ဆိုလိုက်ခြင်တော့တယ် ၊၊
ပြောခြင်တာက ဒို.တတွေကြားမှာ အဲသလို လူတွေက စဖေါက်ခဲ့တဲ့ မျိူးမစစ် သွေးသားမစစ် ဆွေမစစ်တွေကြောင့် လူမျိူးကွဲ ဘာသာကွဲ
၀ါဒကွဲနဲ. ပဋိပက္ခတွေ ရှည်ကြာနေရတာဖြစ်တယ် ၊ ဒီအစွဲအလန်းတွေ မေ့ဖျောက်ပြီး အားလုံးကို မြန်မာလူမျိုး တမျိုးထဲဘဲလို.ခေါ်ရအောင် ဆိုပြန်တောလဲ မဟုတ်ပြန်ဘူးတဲ့ ၊ တဘာသာထဲ လုပ်ဘို.ဆိုတာတော့
ဝေလာမှဝေး စိတ်တောင် မကူးနဲ. ၊
လူမျိုးတမျိူး နိုင်ငံတနိုင်ငံအဖြစ် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးလို.မရရင် ပဋိပက္ခမှူ ကိုပြန်ရောက်မှာဘဲ ဘယ်နည်းဘယ်ပုံဆိုတာကတော့ ငွေရောင်ပိတ်ကား
ပေါ်မှာကြည့်ကြရမှာဘဲပေါ့လေ ၊ အခုမှ မသင့်မြတ်ကြရင် အိမ်နီးချင်း
အဖြစ်နဲ.ရော ဘယ်လို သင့်မြတ် သဟဇါတဖြစ် နေနိူင်ကြမလဲဆိုတာ ဒို.ဦးနှောက်က ငယ်လွန်းနေတယ် စဉ်းစားလို.မရဘူး ၊
နောက်လာမဲ့မျိူးဇက်ကို လှမ်းမျှော်ကြည့် လိုက်ပြန်တော ဇါတ်စင်ပေါ်မှာ ခုန်ဆွခုန်ဆွနဲ.အာပြဲအောင်အော်နေတာတွေ မြင်ရကြားရတာ မှန်ပေမဲ့ ဘာတွေအော်နေတာလဲဆိုတာတော့ အသံတွေ မသဲကွဲလို. လုံးဝမသိရ
ပါဘူးဆိုရင် လိမ်ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူးဆိုတာသစ္စာဆို ကျမ်းကျိန် ပြောရဲ
ပါတယ် ။ သူတို.နောက်ကွယ်မှာ ဘယ်သူတွေက ဘာအစီအစဉ်တွေ ချ
မှတ်ရေးဆွဲနေကြတယ် ဆိုတာလဲ မသိပါဘူး မမှန်းတတ်အောင် ပါဘဲ ၊
လေါလေါဆယ် ဒို.ဘယ်ကိုဦးတည်နေသလဲ ၊ ဘယ်ရောက်လို.ဘယ်ပေါက်
နေသလဲ ပဋိပက္ခတွေ ပြီးတော့မယ်ဆို တကယ် ကို ၀မ်းသာစရာကြီး ဘဲ
ပေါ့နော် ၊ ဒို.မြန်မာနိုင်ငံမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးရရင် ဘယ်သူ.ကို အဖေခေါ်
ရမလဲ ဘယ်သူ.ကို ပထွေးခေါ်ရမဘဲ ဘယ်သူ.ကို မိဒွေးတော်ရမှာလဲ ၊
အမေကျော် ဒွေးတော် လွမ်းရတယ် ဆိုတာက မြန်မာစကား ၊ သိဒ္ဒတ္ထ
ဂေါတမ ဖွားပြီး ၇ ရက်တပါတ်မှာ မယ်တော်မာယာ နတ်ပြည်လားလို. မိဒွေးတော် ဂေါတမီနဲ.ကြီးရသတဲ့ ၊ မိဒွေးဆိုတာ ဒို.တတွေအတွက် ရိုးနေပြီတဲ့လား ၊ ဂေါတမီ လောက်ကောင်း တဲ့ မိဒွေး ရှိတယ်လို.မကြားဘူး တာတော့ အမှန် ၊
ဒီနေ.ဒီမှာဒင် တခန်းရပ်လိုက်အုံးမယ် ၊